Star Hill dia ski resort akaikin'i Seoul . Mahavariana ny fifantohan-tsambony tsara sy ny vidiny lafo vidy. Ity toeram-pambolena kely ity dia feno tanora. Ary koa, Star Hill dia afaka mirehareha amin'ny teknolojia sy fitaovana maoderina.
Star Hill Resort dia nisokatra tamin'ny 1982. Tonga dia nalaza izy teo amin'ireo mpizahatany sy mpitaingina an-toerana, satria ny renivohitra no akaiky indrindra ny renivohitra. Ankoatr'izany, ny toeram-ponenana dia miorina eo an-tendrombohitra Chonmasan, izay heverina ho iray amin'ireo tsara indrindra any Korea . Raha ny marina dia nahazo ny anarany voalohany avy eny an-tendrombohitra ny toeram-ponenana, ary nomena azy ny anarana hoe "Star Hill Resort" tamin'ny taona 2004. Tamin'izany fotoana izany ihany koa tao amin'ny toeram-pitsangatsanganana dia misy serivisy maoderina, fiara tsara tarehy kokoa sy fialam-boly maro.
Ny toeram-ponenana dia manana hantsana enina misy fahasamihafana:
1 maitso - ho an'ny mpangataka;
2 manga - ho an'ny mpankafy;
3 mena - ho an'ny matihanina.
Ny hantsana rehetra dia manana takaitra tsara, noho izany dia ampiasaina ny lanezy amin'ny artifisialy. Miatrika ny avaratra atsinanana izy ireo, noho ny tsy fisian'ny masoandro mivantana eto. Ny elanelana tsirairay dia manana ny fiakany manokana.
Amin'ny asa an-tserasera maitso manga sy manga, izay mianatra ny fomba hikorianana tsara ny fitaovana ary midina. Ankoatra izany, Star Hill dia fantatry ny fahafahana handeha amin'ny alina, ary ny làlana rehetra dia manazava tanteraka.
Faly amin'ny Star Hill
Ankoatra ny fahafahana handehanana ski sy snowboard, ireo vahiny ao amin'ny Hill Hill dia afaka mandany ny fialan-tsasatra amin'ny fialamboly hafa:
Foibe fampiofanana. Zavatra tsy mahazatra io toerana io. Star Hill dia manolotra mpizahantany mandritra ny fialantsasatra hitsidika ny foibe hita any amin'ny faritra maitso, mba handefa fampiofanana sy seminera.
Zava-drano . Eo am-pototry ny tendrombohitra izay voahodidin'ny ala mikitroka no misy ny dobo filomanosana miaraka amin'ny fitaratra. Maro ireo mpamonjy voina miasa any akaikin'ny dobo.
Toerana atletika. Ity dia kianja filalaovana fanatanjahan-tena, ary eto ny zava-drehetra dia natao mba hahazoana antoka fa ny vahiny dia mifoha amin'ny fanatanjahantena, ary ny toe-tsaina dia ambony.
Adventure hill. Toerana fialamboly fanatanjahan-tena, izay hahaliana ny ankizy sy ny olon-dehibe.
Misy Star Star ihany ny Star Hill. Manana efitrano 38 samihafa izy io. Ny vidin'ny trano fonenana isan'andro dia $ 170.
Azonao atao ny misakafo ao anaty kamiao tsara tarehy eo akaikin'ny fidinan'ny renirano, manompo sakafo matsiro izy ireo. Manaova kitapo, mitsidiha ny café kely miaraka amin'ny sakafo haingana sy pizza. Amin'ny ankapobeny, ny vidiny dia tsy mitovy amin'ny renivohitra.
Toe-karavoana amin'ny Star Hill Resort
Star Hill dia toeram-pialam-boly malaza, nefa tsy misy tsy fahampiana, izay tsy maintsy omanina, mandeha any amin'ny vakansy:
Raha oharina amin'ny toeram-pialan-tsambo hafa dia manana habe kely ny Star Hill izay misy fiantraikany amin'ny fialam-boly sy ny fialam-boly;
Tsy misy làlambe ho an'ireo mpitia am-pilaminana;
Ao amin'ny toeram-pitsangatsanganana dia tsy misy kodiarana, ka afaka mandeha ihany ianao;
Ny tranonkala ofisialy dia tsy misy afa-tsy amin'ny teny Koreana ihany.
Mba hahatongavana any Star Hill, tsy maintsy alehanao ny metro any amin'ny "Cheonnyannii" station, izay hita ao amin'ny laharana laharana 1, dia alao ny bus 9201, izay mitondra anao mivantana mankany amin'ny fidirana.
Ny Oceanarium (Kuala Lumpur)
Herinandro vody 19 herinandro - tsy misy fanelingelenana
Hazo fanitarana ny fanilo amin'ny endriny
Zana-katsaka ho an'ny fatiantoka
Tenisy ho an'ny tennis
Nahoana ny olona no lasa zavamaniry?
19 fety isankarazany - famantarana
Sarin'ny Oshak Theme Park
Savony amin'ny tananao - 4 fomba fanamboarana ho an'ny vao manomboka miaraka amin'ny torolalana tsikelikely
Goose matavy - toetra amam-panahy sy fanoherana
Psychology ny vahoaka
Ahoana no fomba hifidianana ny fomba anao?
Ny fitsaboana amin'ny maso eo an-tokantrano
Afaka mandany lanja ve aho raha misotro rano be?